Misy amin’ireo sekoly tsy miankina mantsy no nandray fanapahan-kevitra nanomboka ny volana mey lasa teo ka nanome devoara ny ankizy tsy hiatrika ny fanadinam-panjakana hatao any an-trano ary ny naoty azo avy amin’izany miampy ny teo aloha no tsaraina ary izay no handefasana ny mpianatra iray hifindra kilasy na tsia. Tsy misy banga ny saram-pianarana ao anatin’izany ankoatra ny volana Aprily lasa teo izay tsy notakiana mihitsy. Betsaka amin’ireo Ray aman-dReny anefa no sahiran-tsaina, indrindra fa ireo miasa isan’andro. Tsy maintsy manokana fotoana hanazavana lesona amin’ilay zanany mantsy izy ireny no sady manokana fotoana mba hanaraha-maso ihany koa ka mila tsy ho vita. Misy amin’ireo sekoly tsy miankina sasany indray no niantso fivoriana ny faran’ ny herinandro teo ka nanapa-kevitra fa amin’ny volana septambra indray vao mitohy ny fampianarana. Tsy maintsy mandray anjara kely tamin’ireo saram-pianarana telo volana tsy naloany kosa anefa ny Ray aman-dReny izany hoe : nanomboka ny volana aprily lasa teo hanohanana ny mpampianatra. Izay zava-bitan’ny mpianatra nandritra ny fotoana nianarany araka izany no hitsarana ny mpianatra iray. Marihina moa fa raha niandry fatratra izay mety ho vahaolana aroson’ny filoham-pirenena mikasika ny fampianarana ny rehetra ny alahady alina teo dia tsy nisy mihitsy izany.